Mashiinka Iswaafajinta Quruxda: Talooyinka AI ee Shaqsiyadeed ee Keenaya Iibinta Quruxda Internetka | Martech Zone
Mashiinka Isbarbardhiga Quruxda: Talooyinka AI ee shakhsi ahaaneed ee kaxeeya iibka qurxinta ee internetka
Cidina ma ogaan karin saameynta apocalyptic ee COVID-19 ay ku yeelan doonto nolol maalmeedkeena iyo dhaqaalaha iyo gaar ahaan tafaariiqda iyadoo la xirayo dukaamo badan oo waaweyn oo hareeraha waddooyinka ah. Waxaa la sameeyay sumado, dukaamo, iyo macaamiisha dhammaantood waxay dib uga fikiraan mustaqbalka tafaariiqda.
Mashiinka Ciyaaraha Quruxda
Mashiinka Ciyaaraha Quruxda(BME) waa xalka tafaariiqleyda gaarka ah ee gaarka loo yaqaan, e-tailers, dukaamada waaweyn, timajarayaasha, iyo noocyada. BME waa aalad casriyeysan oo calaamadeysan oo ku saleysan AI oo ku saleysan AI oo saadaalinaysa oo shakhsiyeynaysa xulashada alaabada ee ay u badan tahay inay iibsadaan macaamiisha. Sidoo kale awood u lahaanshaha ku talinta alaabada BME waxay shaqsiyadeysaa dhamaan qodobada safarka macaamiisha ee khadka tooska ah laga bilaabo ilaa iibinta illaa bogagga degitaanka.
Sida ganacsade tiknoolaji ah, tani maahan aasaasihii Nidhima Kohlixalka ugu horeeya ee dhijitaalka ah. Nidhima sidoo kale waa aasaasaha Quruxdayda Ciyaaraha™ (MBM), waxaa la aas aasay sanadkii 2015 ilaa tan iyo markii uu noqday talo soo jeedinta alaabada quruxda badan ee aduunka iyo barta isbarbardhiga qiimaha oo ah mid ka mid ah websaydhada ugu quruxda badan aduunka ee leh in ka badan 400,000 oo alaab ah.
MBM waxay la shaqeysay qaar ka mid ah dukaamada tafaariiqleyda ugu fiican iyo noocyada ay ka mid yihiin Harrods, Harvey Nichols, Liberty, Look Fantastic, Clarins, Bobbi Brown, iyo in ka badan, iyagoo macaamiisha u oggolaanaya inay dhammaantood ka wada dukaameystaan ​​hal bog oo keliya oo ay isbarbar dhigaan qiimaha. Thanks to waxyaalihii laga bartay MBM, Kohli wuxuu awooday inuu qaato shan sano oo xog ah, falanqeeyo caadooyinka wax iibsashada macaamiisha kuna dabakho qaabkeeda cusub ee ganacsiga BME taas oo loogu talagalay inay siiso aragtiyo iyo qalab anshax leh B2B.
Sidee Shakhsiyadeynta AI ay u waddo beddelaadyada
Mashiinka Isbarbardhigga Qurxinta wuxuu u shaqeeyaa labadaba si firfircoon, iyadoo macaamiisha ay ku qoraan macluumaadkooda iyagoo isticmaalaya Caawiyaha Virtual Meel kasta oo khadka tooska ah looga adeegsado si looga helo su'aalaha habka baaritaanka ee is-dhexgalka ah ee ku saabsan nooca maqaarkooda, welwelka maqaarkooda, timaha iyo welwelka jirka, iyo doorbididda wax soo saarka ama urta.
Xogtaani waxay u oggolaaneysaa BME inay adeegsato AI iyo xogta si loogula taliyo alaabada saxda ah isla markiiba. Waxay sidoo kale u shaqeysaa si isdaba-joog ah, iyadoo loo kuur galayo wax iibsashada iyo daalacashada. Waqtiga dhabta ah ee lahaanshaha farsamada qurxinta xalku wuxuu bedelaa khibrada macaamiisha quruxda iyadoo awood u siinaysa ka qaybqaadasho gaar ah, shakhsi ahaaneed goob kasta oo taabasho ah safarkooda wax iibsashada ee internetka laga bilaabo iibinta illaa bogagga degitaanka iyo talooyinka wax soo saarka.
Marka la eego BME, macaamiisha waxay helayaan kaaliyaha iibka dukaanka oo hal-hal ah, sida khibrad khadka tooska ah iyo raaxada gurigooda. Maaddaama dukaammadii ay hadda dib u furmeen, BME sidoo kale waxaa lagu hirgelin karaa dukaanada taabashada ee dukaanka si loo abuuro istiraatiijiyad omnichannel wax ku ool ah. Heerka sare ee shaqsiyeyn iyo talooyin taas oo siinaysa dukaamada tafaariiqda karti farsamo oo caqli-gal ah iyadoon loo baahnayn inay dhisaan.
Iyo, hadda in ka badan sidii hore markii isbeddelka tafaariiqda ay horseed ka tahay adduunka cusub ee ka dambeeya COVID waxaa jira baahi badan oo loo qabo waaxda tafaariiqda si loo hirgeliyo barnaamijka BME si loo hubiyo guusha iyo tan ugu muhiimsan ee badbaadada ganacsigooda maanta isbeddelaya cimilada.
Tani waa markii ugu horeysay abid, qalab shaqsiyeyn ah ayaa loo sameeyay si gaar ah warshadaha qurxinta waxaana ku shaqeeya xogta tartamayaasha oo gebi ahaanba horay loo arag.
Haddaba Sidee buu BME u shaqeeyaa?
Ku darista AI sirdoonka gaarka ah ee quruxda iyo waliba sirdoonka tartamaya 5 sano, BME waxay khuseysaa algorithms-ka barashada mashiinka firfircoon si loo aqoonsado qaababka nuanced ee ku jira xogta macaamiisha. Si kale haddii loo dhigo, BME waxay ku aqoonsaneysaa alaabada quruxda la doorbido da'da, waxyaabaha maqaarka khuseeya iyo qaababka wax iibsashada. Markasta oo macaamiisha ay soo booqdaan dukaanka internetka, macluumaadka badan ee qalabku barto oo si otomaatig ah ayuu u hagaajiyaa.
Mashiinka ayaa markaa hoos u dhigaya xulashada macaamiisha, isagoo saadaalinaya badeecada macmiilku u badan yahay inuu iibsado, kordhinta iibka, iyo daacadnimo. BME waxay shaqsiyan shaqsiyaysiisaa talooyinka wax soo saarka, alaabada isugeyta, emayllada, bogagga soo degida, iyo inbadan si macaamiisha ay uhelaan khibrad shaqsiyadeed oo dhameystiran oo 360-degree ah oo wax ku biirisa ku hagaajinta beddelaadda iibka 30 illaa 600%.
BME si wax ku ool ah ayaa looga hirgeliyey Boqortooyada Midowday iyadoo lala kaashanayo Farmashiyaha Faransiiska kuwaas oo horey u arkay koror 50% ah AoV (Qiimaha Amarka Celceliska) iyo 400% kordhinta heerarka u beddelashada iibka. BME waxay sidoo kale la shaqeysay astaamaha is qurxinta ee ugu sarreeya By Terry iyo mid ka mid ah dukaamada tafaariiqda ugu quruxda badan Douglas.
Iyada oo ku saleysan daraasadihii kiisaska ee dhowaa, BME waxay samaysay 18m talooyin ku saabsan alaabta quruxda illaa iyo hadda. Way kordhisay celceliska qiimaha dalabka by cajiib ah 50% iyo heerarka beddelashada oo kordhay iibinta koror 400%.
Mashiinka Iswaafajinta Quruxda Soo jeedinta Iibinta Gaarka ah
BME waxay qaadataa hab omnichannel wax ku ool ah oo loogu talagalay tafaariiqda iyada oo ka shaqeyneysa khadka tooska ah, abka, emaylka, iyo dukaanka. Tan ugu muhiimsan, BME waxaa ku shaqeeya xogta tartame iyo xogta sirdoonka quruxda ee saynisyahannada qurxinta samaynta sumadda shirkadda BME tartamada quruxda ™ ka saxsan, dhab ah, oo lagu kalsoonaan karo marka la eego natiijooyinka shaqsi ahaaneed. Iyo, cayaarahan waxay ka faa'iideysanayaan baahiyaha dhabta ah ee macaamilka daqiiqadda ay isqoraan, si ka duwan barnaamijyada kale ee muddada dheer ku qaata barashada caadooyinka macaamiisha.
Marka laga eego xagga aragtida ganacsiga, qalabku wuxuu macaamiisha ku qaataa 1-2 saacadood oo keliya si ay u hirgeliyaan sidaa darteed saameyn weyn kuma leh hawl-maalmeedka maanta ganacsigooda iyo maaddaama ay tahay barxad isku-dhafan oo si toos ah ugu habboon AI, macaamiisha ayaa macsalaameyn kara nidaamyada gacanta waqti-lumis.
Sidee BME uga duwan tahay?
Marka la barbardhigo kuwa kale astaamaha shakhsiyadeed ee shakhsiyadeed ee suuqa, BME ma bixiso kaliya talooyinka wax soo saarka ee ku saleysan su'aalaha laakiin sidoo kale waxay saadaalineysaa dabeecadaha macaamiisha waxayna shakhsi ahaan u taabataa taabashada KOOWAAD qaybta quruxda laga bilaabo timaha ilaa udgoonka ilaa daryeelka maqaarka iyo jirka iyo ciddiyaha. Waa madal gaar ahaaneed gaar ahaaneed oo gaar u ah oo kaliya ku talinaysa alaabada iyo midabada saxda ah ee ka shaqeeya qayb kasta oo qurux ah laga bilaabo daryeelka maqaarka ilaa timaha oo aan ahayn kaliya hal qayb oo ku habboon macaamilka. Sidoo kale, maadaama ay ku shaqeyneyso 5 sano oo xog ah, waxay u abuurtaa kor u kac macaamiisheeda iyo khibradooda macaamiisha laga bilaabo maalinta 1.
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaa jira xalal badan oo shaqsiyeed oo 360 ah kuwaas oo aan lagu hagaajinaynin quruxda maadaama aysan qurux gaar ah ahayn, sidaa darteed ma bixiyaan isla 400% kor u qaadista iibka sida adeegsiga xalka quruxda gaarka ah ama waxay ku qaataan 3-6 bilood runti waxay muujineysaa kor uqaadid waana wax gacanta ku haysa.
Mashiinka Isbarbardhigga Qurxinta wuxuu leeyahay qaab cusub oo loogu talagalay shakhsi ahaanta dhammaan khibrada adeegsiga macaamiisha goob kasta oo taabasho ah si looga caawiyo macaamiisha inay helaan Kulamadooda Quruxda y iyada oo loo marayo astaamaha Kaaliyaha Qurxinta Virtual ama iyada oo aan loo dhigin boostada COVID adduunka. Waxaan rajeyneynaa inaan dardar galino horumarkooda iyaga oo u keenaya shabakadeena iyo khibradeena ku saabsan warshadaha qurxinta.
Camille Kroely, Madaxa Caalamiga ah ee Hal-abuurnimada Furan & Adeegyada Dijital ah
Tmustaqbalkiisu waa dijitaal iyo guusha tafaariiqda quruxda beauty .waa Mashiinka Iswaafajinta Quruxda ™.
Tags: aibeautymatoorka iswaafajinta quruxdafarsamada qurxintaBobbi BrownClarinsHarrodsHarvey nicholsLibertyFiiri Fantasticdukaanka internetkaka kooban shakhsitalooyinka shakhsi ahaaneedtalooyinka
Sida loo qoro Qoraal Video Video ah oo Sharaxa Awood Leh oo Wax ku ool ah